Iindaba - Ukusuka "ekwenzeni inzuzo" ukuya kusomashishini, uLiu Jianhong weQela leXueruisha yindoda enebali
Ukusuka "kwenzelwa inzuzo" ukuya kusomashishini, uLiu Jianhong weQela leXueruisha yindoda enebali
Ukunyamezela kunye nokusukela oovulindlela
Le yindoda enebali. Ngonyamezelo olomeleleyo, umoya ongayekeleliyo, kunye nokuphantse wenze into elukhuni, indlela ephantsi kweenyawo zakhe ihlala igcwele ithemba, kwaye wolula phambili ngokuxhuma kunye nemida ... Umntu otya oononkala, nangona kunjalo, ngohlalutyo lwakhe olusengqiqweni kunye nomgwebo ochanekileyo, uye wathandwa ngokukodwa sisiphelo sakhe ngalo lonke ixesha. Ukusuka koku, yena kunye neqela lakhe lolawulo bayile ngocoselelo-iBaoding Xueruisha Down Products Co, Ltd. yaba yinkampani yokuqala edwelisiweyo eBaoding ukuza kumhlaba kwibhodi yeSixeko iShijiazhuang.
Ubulumko, ukuzola, kunye nokulula kukubonakala kwentatheli kwasekuqaleni kukaLiu Jianhong. Zonke izimbo zomzimba zityhila isimilo esicocekileyo. Izibini ezibhulorho zempumlo, amagama athethwayo, uncumo ebusweni bakhe, kunye nolwimi olusengqiqweni nolucacileyo lwenza abantu bazive ngeli shishini labucala. Oosomashishini abanakukunceda kodwa baqonde kwaye bahloniphe. Umfanekiso wesomashishini oqhelekileyo ongumConfucius waya ucaca ngokuthe ngcembe njengoko udliwanondlebe lwalusaqhubeka.
Ngamaphupha, usomashishini oyintloko
Ngo-1973, uLiu Jianhong wazalelwa kusapho lomlobi eDazhangzhuang Village, Baiyangdian, Anxin County. Ngo-1990, wamkelwa kwisikolo esiphakamileyo ngenxa yeengxaki zemali ekhaya kwaye kwafuneka anikezele ngezifundo zakhe. Emva kokuyeka isikolo, u-Liu Jianhong waya kumzi-mveliso osezantsi e Anxin County waya kusebenza njengomsebenzi ohambisa uboya. Ukucheba iinwele kwakungumsebenzi onzima kwaye odinisayo. U-Liu Jianhong khange adambe okanye adlale emtyibilizi. Uvuke kwakusasa wabulisa ebumnyameni wasebenza nzima. Ukhawuleze waphumelela uxabiso kunye nentembeko kumphathi wefektri. Wanyuselwa kwi-accountant kwisithuba esingaphantsi kwesiqingatha sonyaka.
Ngo-1992, nge-yuan engama-20 000 ayigcinileyo kumsebenzi wesingxungxo kunye nephupha lokuqala ishishini, wazimanya nabahlobo bakhe ukuya emazantsi esiXeko saseGuigang, eGuangxi, kwaye waqalisa ukuthengisa iifilimu eluhlaza kunye nentengiso yokuthengisa. Emva kweminyaka emithathu yokusebenza nzima, ngo-1995, u-Liu Jianhong oneminyaka engama-22 ubudala wayenezigidi zemali, kwaye waba ngumnini omncinci weDazhangzhuang Village evela kusapho oluhlwempuzekileyo. Wayethembele ekusebenzeni nzima nakwinkuthalo yokumba "imbiza yokuqala yegolide".
IPhoenix nirvana, vuka kwakhona
Ngelixa uLiu Jianhong edibanisa izixhobo kwaye elungiselela ukwenza umsebenzi wakhe ube mkhulu, wahlangabezana nezona ngxaki zinkulu. Ngo-1996, ngenxa yokuba wayezimisele ukuphumelela. Isixa semali sasityalwe ngokungakhathali, kwaye phantse i-yuan yesigidi eqokelelwe ngomsebenzi onzima yaphoswa ubusuku bonke. Ukuze baphile, u-Liu Jianhong kunye nenkosikazi yakhe bathengisa i-barbecues esitratweni. Esi sibini sisebenze nzima unyaka kwaye sagcina i-20,000 yuan. Ngo-1997, u-Liu Jianhong wayiphatha i-yuan engama-20 000 epokothweni yakhe kwaye waya eGuangxi kwakhona ukuya kufumana amathuba oshishino ngephupha lakhe. Emva kweminyaka emi-5, ixabiso elifanayo lalingama-yuan angama-20 000, ndaza ndaya kwindawo enye kwakhona. U-Liu Jianhong wayegcwele ziimvakalelo, kodwa ngokungafaniyo nexesha lokugqibela, unamava kunye nokuzithemba. Umnqweno wakhe kwezorhwebo womelele kwaye unomdla ngakumbi kumaphupha akhe. Ukusukela kuqhubeka ngakumbi, kwaye kwangaxeshanye kunesibindi kwaye kukhuthele ngakumbi, kwaye kukhule ngakumbi kwaye kuzinzile kuneminyaka emihlanu edlulileyo.
Ngelixa wayephanda nzima, uLiu Jianhong ngempazamo wafumanisa ukuba indawo yokuxhela apha iqokelele inkunkuma eyayikhe yahlolwa ziingceba zamadada. Onamava wayenokubona krwaqu nje ukuba ezi zinto zenkunkuma ziqulathe uboya obuninzi. Wayecinga ukuba xa enokuhlukanisa iinwele, usenokwenza imali. Ke, uchithe ngaphezulu kwe-20,000 yuan ukulayisha ngaphezulu kwe-30,000 yeekati zenkunkuma kwaye wayithutha wayibuyisela ekhaya. Emva kweentsuku ezininzi nobusuku bokulwa, wahlulahlula ngaphezulu kwe-10,000 ikati zoboya kwaye wenza ingeniso engaphezulu kwe-200,000 yuan. Indlela enomoya nemvula, intwasahlobo nekwindla ezininzi, umoya, iqabaka, ikhephu kunye nemvula zibetha ii-rapids. Kule minyaka, uLiu Jianhong uye waqokelela isixa esithile semali eyinkunzi.
Ukwenza nje izinto ezingavuthiwe kunokuba "ngumxhamli" kuphela, hayi usomashishini. Ngo-1999, uLiu Jianhong wabhalisa iJinlida Down Products Factory, wabhalisa uphawu, kwaye wangena ngokusemthethweni kwicandelo lemveliso. Wangena kwimarike iinyanga ezininzi, ehlalutya ngenyameko imarike, kwaye waqulunqa imveliso kunye nezicwangciso zokuthengisa. Ngokwefilosofi yeshishini, besisoloko sinyanzelisa ukuba "siphumelele abathengi ngokuthembeka kwaye siphuhlise iimarike ngobulumko". Kulawulo kwishishini, ebesoloko egxininisa ukuba "inzululwazi kunye netekhnoloji zezona zinto zinamandla okuvelisa". Ngaphantsi kobunkokheli bukaLiu Jianhong, umzi-mveliso wavelisa ibhetshi yokuqala yeeduvethi kwaye wabakhuthaza kwaye wabathengisa ngeendlela ezahlukeneyo. Njengasebusika ka-2000, yayineevenkile ezingama-50 zeefranchise, ngaphezu kwe-20 malls ezinkulu, kunye neefektri kwiidolophu ezahlukeneyo nakwii-counties ezisemntla. Umzi-mveliso ugcwele amandla kunye namandla. Njengoko inkampani ikhula, uhlala ecinga ngayo: Ukuze ibe nkulu, inkampani kufuneka ijonge kwimarike nakwilizwe liphela.
Uphuhliso oluqhubekayo, ukuya kwinqanaba eliphezulu
Iqhekeza leentsiba ezincinci alinawo umxholo ophantsi wobugcisa. U-Liu Jianhong ukhokele inkampani ukuba inyanzelise ekuveliseni ngokungqongqo ngokungqinelana nemigangatho yamanye amazwe. Zithe zakuphuma iimveliso ezantsi, zamkelwa ngabathengi zaza zaphumelela "iMveliso yeSizwe eGqwesileyo", "i-Hebei Famous Brand", "i-Hebei Famous Brand" kunye ne "Consumer". Abo banokuyithemba imveliso "," ikhontrakthi kunye neyunithi enokuthenjwa "kunye namanye amabhaso. Ukuphuhliswa kweemveliso ezantsi, ukuyilwa kweempawu ezisezantsi, kunye nokukhuthaza inkcubeko yeziko eliye laba yimicimbi ecingekileyo uLiu Jianhong neqela lakhe abacinga ngayo Ngokufika kwexesha lolwazi kwi-Intanethi, uLiu Jianhong wagcina isantya namaxesha, waqokelela ulwazi oluninzi lwentengiso kwi-Intanethi, wathengisa iimveliso zenkampani ezahlukeneyo kwi-Intanethi, waqalisa iiodolo kunye nentengiso kwilizwe liphela, kwaye intengiso inyuke ngama-50%.
Ngo-2003, Liu Jianhong walitshintsha ngokusesikweni igama Jinlida Phantsi Products Factory ukuba Anxin County Liteshu Phantsi Products Co., Ltd., kwaye yandisa iintlobo imveliso phantsi uphawu "Liteshu", ukusuka duvet eyodwa yokuqala ukuya iibhedi zokulala, abaninzi iimveliso ezinje ngeebhatyi ezisezantsi kunye neetafile ezantsi. Ngo-2005, "uLiteshu" bonke baphumelela i-ISO9001: 2000 yokuqinisekisa umgangatho wenkqubo yolawulo lomgangatho. "I-Liteshu" iphumelele ukuthembela ngomgangatho, yafumana inani elikhulu leodolo, kwaye yaqala ukungena kwimakethi yamanye amazwe. Ukuthengiswa kwemveliso yenkampani kwafikelela ngaphezulu kwamaqhekeza angama-100,000 ngaloo nyaka, kwaye ixabiso lazo ladlula kwi-yuan yezigidi ezingama-50. Ngo-2006, inkampani yase "Liteshu" kunye ne-France Saint Laurent • Xueruisha (International) Garment Co, Ltd. yajoyina imikhosi ukubhalisa nokuseka i-Baoding Xueruisha Down Products Co, Ltd., kwaye yasungula uthotho lweemveliso "brand Xueruisha". Ngo-2009, watyala imali eninzi ukwenza uphawu lwentengiso oludumileyo "uEdelweiss", incopho yeXueruisha. Iimveliso zithengisa kakuhle kwizixeko ezikhulu neziphakathi ezinje ngeBeijing, iTianjin, iShanghai, iChongqing, njl., Kunye nenqanaba phakathi kweentaba zokhenketho lwefashoni ebusika eYurophu naseMelika, kwaye ziyathandwa ngabathengi kula mazwe nakwimimandla. Ngo-2010, uXueruisha watyale imali eninzi ekwakhiweni kweefektri ezinkulu ezintlanu zedada eShandong, ngemveliso yemihla ngemihla yeentsiba zedada ezili-190,000, kwaye ngokuthe ngcembe waseka ipateni yokusebenza kwezolimo enye, ushishino kunye norhwebo. NgoMeyi 27, 2014, iXueruisha Down Products Co., Ltd. yadweliswa ngempumelelo njengenkampani yokuqala eBaoding ukufika emhlabeni kwibhodi ephambili yeSixeko saseShijiazhuang. Kule minyaka ingama-20 idlulileyo, iXueruisha Down Products Co, Ltd. ithengile, yaqhubekeka yathengisa phantse iitoni ezingama-50 000 zeentsiba; ivelise kwaye ithengise iimveliso ezizizigidi eziyi-2.2. Zonke ezi zinto zenza u-Liu Jianhong azele kukuzithemba kuphuhliso lwekamva lenkampani.
U-Liu Jianhong wazisa ukuba inkampani iseke imarike yaphesheya yeemveliso zebhatyi, kwaye ishishini layo laphesheya iye yaqhubeka unanamhla, kwaye inabafowunelwa beshishini namazwe angaphezu kwe-10! Kuphando kunye nophuhliso lweemveliso zabathengi bangaphandle, abaqulunqi beenkampani banolwazi oluninzi malunga neendlela zaseYurophu naseMelika, kwaye ubuchule babo befashoni abufanele buthathwe kancinci, obuhambelana nengcinga ephucukileyo yokusetyenziswa kwefashoni yabathengi basekhaya. Zonke iinkcukacha zicokiswe ngokugqibeleleyo. "Kodwa i-Fallen Leaf kufuneka ibuyele ezingcanjini zayo. Nokuba intengiso yaselwandle iphawule kangakanani kuthi, ukuba asinakho ukuqokelela ifuthe kubathengi basekhaya, asinakuba sisizwe." U-Liu Jianhong ucinga.
Ukususela ngo-2013, i Anxin County Urhulumente uye walungisa ngokupheleleyo ishishini phantsi. U-Liu Jianhong ukhokele ekwakheni amaziko onyango amdaka ukufezekisa imigangatho yokukhutshwa kwamanzi. Kwangelo xesha, ukuthintela ungcoliseko lomoya, ibhoyila evuthayo yaguqulwa yamalahle yatshiswa. irhasi yendalo.
Ngo-2015, iQueruisha Group ebhaliswe njenge-Hebei Rongdu Electronic Commerce Co., Ltd., kwaye yaseka indawo ezantsi kwi-intanethi kunye neqonga lokurhweba ngekamva kunye ne-Bohai Commodity Exchange, kwaye yasungula indawo yokugcina enkulu esemantla, ezinikele ekudibaniseni imigangatho esezantsi. .
Nxibelelana nesithili esitsha, utshintshe kwaye uhlaziye
Ngo-Epreli 1, zafika iindaba zokusekwa kweSithili seXiong'an esitsha. Njengosomashishini ongumfama owayesebenza nzima evela emazantsi, uLiu Jianhong wayevuya ngokwenene ngamathuba ophuhliso kwidolophu yakhe, kwaye kwangaxeshanye, wayecinga nzulu malunga nendlela yokwenza igalelo kulwakhiwo lwesithili esitsha.
Njengosihlalo we-Hebei Down Industry Chamber of Commerce, u-Liu Jianhong uvakalise ukuba uyakuxhasa ngokupheleleyo ukwakhiwa kwesithili esitsha kwaye akhokele ekuthobeleni izigqibo ezithathwa sisithili esitsha. Kwangelo xesha, ngokungqinelana neemfuno zesithili esitsha, sidityaniswa neempawu zesithili esitsha, siya kwenza konke okusemandleni ukulungiselela inguqu kunye nokuphuculwa kweshishini. Eyokuqala kukuqhubeka nokwandisa iholo yomboniso esezantsi, ukwenza umsebenzi omuhle wokhenketho lweshishini, kunye nokwandisa ukuthengiswa kweemveliso ezisezantsi ngelixa ukhuthaza iBaiyangdian kunye nommandla omtsha; Okwesibini kukuxhomekeka kubuchwephesha bexesha elizayo kunye nedatha enkulu eziluncedo zommandla omtsha ukuseka uphando oluphezulu kunye nophuhliso lwezinto ezisezantsi kunye neemveliso. Ukuthembela kwizibonelelo zedatha enkulu ukwakha ikamva kunye nokujonga iqonga lokuthengisa kwi-Intanethi kwiimveliso ezisezantsi. Isithili esitsha masingabinayo imveliso esezantsi kunye nemveliso, kodwa iqonga lokuthengisa uthungelwano kwisithili esitsha liyakuqonda eyalo inguqu kunye nokuphuculwa, kwaye lenze ukuba ishishini lidibane kulwakhiwo nophuhliso lwesithili esitsha, hayi ukupheliswa amaxesha, kunye nokuma kumkhwa.
Yiba nesibindi sokuthatha uxanduva kwaye wenze igalelo elingakumbi
U-Liu Jianhong uhlala ekholelwa ukuba, ukongeza kwimizamo yakhe yokukhwela umoya kunye namaza, kunye nophuhliso lokunyuka, i-Xueruisha Down Products Co, Ltd. inoxanduva lokukhokela ishishini eliphantsi ukuba libe sempilweni, kwinqanaba eliphezulu kunye nenqanaba lokuphucula umkhondo. Ngenzondelelo yakhe, unesibindi sokuzama ukwenza izinto ezintsha, kwaye azityebise rhoqo, ukuba negalelo lamandla akhe kwishishini, kubasebenzi nakubantu bendawo. Ukunyuka kweshishini kuye kwamzisela iimbeko ezininzi kunye nezihloko: "UMsebenzi weSizwe weeMpahla eyolukiweyo", "Usomashishini oGqwesileyo", "uSekela Sihlalo we-China Down Industry Association", "Ishishini eliGqwesileyo e-China Down Industry", "e-Hebei Down Industry Chamber Ezentengiselwano "zinde". Njengenkokheli yeshishini, uthathe inxaxheba ekuthatheni inxaxheba kwimigangatho esezantsi ye-China Down Industry Association, kwaye wakhokela ngokubonakalayo kumashishini kulwakhiwo lwezixhobo zolawulo longcoliseko ekuhlaziyweni kweshishini eliphantsi. iminyaka, inkampani inikele ngaphezulu kwe-2 yezigidi ze-yuan eluntwini kwaye yanikela ngaphezulu kweebhatyi eziphantsi kwe-10,000. Yanikwa isihloko esithi "Ngabanye abaPhucukileyo" nguRhulumente waBantu bePhondo lase-Hebei kuMnikelo kwiMfundo kunye ne "Shishini lothando" yi-Anxin Umanyano lweNtlalontle.
Ukuqamba kungumxholo ongunaphakade wophuhliso lweshishini kunye nomphefumlo weshishini. Isicwangciso esiliqili kunye nomxholo osisiseko wolawulo lweshishini likaLiu Jianhong lwenziwa malunga negama "uguquko". Unokuqonda kwakhe okungafaniyo "nokwenziwa kwezinto ezintsha": ukucinga ngento abanye abangazange bayicinge kuthiwa yinto entsha, ukwenza izinto abanye abangazenzanga kuthiwa kukutsha; ezinye izinto zibizwa ngokuba zezintsha kuba ziphucula umgangatho womsebenzi nobomi, ezinye kuba ziphucula ukusebenza kakuhle komsebenzi, kwaye ezinye kuba zomeleza imeko yokhuphiswano. Kodwa into entsha ayifanelanga ukuba luhlobo lwento entsha, inokubekwa ngendlela entsha. Ukupakisha izinto ezindala kubizwa ngokuba kukutsha, kwaye ukunika amanqaku amatsha okungena kwizinto ezindala kukwabizwa ngokuba kukutsha; Ukutshintsha inani elipheleleyo ngaphandle kokutshintsha ulwakhiwo kubizwa ngokuba kukutsha, kwaye ukutshintsha ixabiso lilonke ngaphandle kokutshintsha ubume kubizwa ngokuba kukutsha.
Ngokuchanekileyo ngenxa yokuqhubeka "kokuyila izinto ezintsha" ukuba inkampani yakhe ikhule imihla ngemihla, kwaye kungenxa ye "ezintsha" ukuba iXueruisha Down Products Co, Ltd. iqhubele phambili eluzukweni. Ngaphezulu kweminyaka elishumi yokuqhubeka kwezinto ezintsha, ngaphezulu kweshumi Ngokuhlola okungapheliyo, uLiu Jianhong kunye neqela lakhe lolawulo bahlala bebambelele kwifilosofi yeshishini "yophuhliso olutsha, ukunyaniseka nokunyaniseka", okuphumelele ukuthathelwa ingqalelo kwabathengi kunye nokuqinisekiswa onke amacandelo oluntu.
Ixesha Post: Nov-27-2020